Darjeeling Hills Station Tour | Diiwaanka Darjeeling Fasaxa Darjeelka
Barnaamijka Habeenada 05
| Code Code: 120
Mid ka mid ah toddobada walaasha walaasha ee Waqooyi Bari ee India, Sikkim's Gangtok iyo Hindiya shaaha Darjeeling oo leh saldhigyada buuraha quruxda badan oo shaki badan ayaa ka dhigi kara dalxiisayaal. Nestled by dabeecadda, safarka rugta ee Darjeeling ayaa hubaal ku roonaan doona dalxiisayaasha xilliga xagaaga. Waxaa jira Bandhigyo Daljeeling ah oo badan oo la heli karo iyo Darjeeling Gangtok Tour.
Soo-qaadashada Garoonka Diyaaradaha ee Bagdogra / Saldhigga Jalpaiguri ee Jalpaiguri Gaadiidka Gangtok (125 kms. / 4.5 hrs). Albaabka u furan Sikkim. Isaga oo ka hadlaya Himalayan Ranges, Gangtok waa magaalo qurux badan. Budhisnimadu waa diin weyn oo ka jirta aaggan. U soo wareejinta hoteelka. Ku nasashada maalinta oo dhan xilliga firaaqada. Gabbasho joogitaan ah GANGTOK.
Ka dib markii quraacda booqasho ku timid Machadka Tibetology, Dordul Chholten stupa, Rumtek Monastery, Waddada Roobka iyo Shanti aragtida. Gabbasho joogitaan ah GANGTOK.
Quraac ka dib, Goobjoogayaal u socdaalaya Waqooyiga Ameerika iyo Baba Mandir oo ah dhererka cagaha 13,500. (Haddii ay dhacdo in aan la heli Karin Lubnaan, sababtoo ah xaaladaha cimilada xun, waxaan booqan doonaa Namachi, oo micnaheedu yahay "Sky High". dooxada) iyo dib ugu noqo Gangtok. Gabbasho joogitaan ah GANGTOK.
Kadib Quraac Kadib Diyaarad Darjeeling (130 kms / 4), oo ku yaal Waqooyiga Bengal ayaa waxaa iska indha tiray Himalayan Ranges waxayna degeen Tea Gardens. Marka la yimaado, U soo wareejinta hoteelka. Nasashada maalinta waa madadaalo. Habeenimadu waxay joogtaa KALA-DIB.
Booqashada hore ee subaxda hore ee buuraha Tiger si ay u arkaan qorraxda quruxda badan ee ku taal Buurta Kanchanjunga, Waddada oo soo booqda cirifka caanka ah ee caanka ah iyo Baaskiiliyaasha. Kadib quraac ka dib booqasho Machadka Himalooyinka Dhirirka Himalooyinka, Xayawaanka Himalaya, Jabbaan Jabbaan, Beerta Rock, Gangamaiya Park iyo Xarunta Dhismaha ee Tibetan, En-route waxaad ku arki doontaa aragti xiiso leh ee Jardiinooyinka Darjeeling. Habeenimadu waxay joogtaa KALA-DIB.
Ka dib markii quraacdu u socoto Garoonka Diyaaradaha ee Bagdogra / Saldhigga Jalpaiguri ee New Jalpaiguri (96 kms / 3 Saacadaha) oo loogu talagalay socdaalka Journey. Goob-socodka Booqashada Suuqa Pasupati (Xuduudda Nepal) iyo Mirik Lake (Dhulka Dabiicada ah ee ku hareereysan Buuraleyda iyo geedaha Pine). Safar ayaa soo gabagabeynaya.
Su'aalaha la weydiiyo / Nagala soo xiriir